Hisafidy Poizina? Ny Ortodoksia Rosiana sa ny Fandraràna Tsy Hampiasa Media Sosialy ? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Avrily 2017 16:49 GMT
Sary : Vitaly Milonov / Vkontakte
Ireo mpanakiana an'i Vitaly Milonov, angamba ny faran'izay fatra-pifikitra amin'ny nentin-drazana mora tohina indrindra ao amin'ny Parlemanta Rosiana, dia nivoady ny hanao izay handraràna azy tsy hampiasa media sosialy ao amin'ny VKontakte, ilay tambajotra sosialy malaza indrindra ao Rosia, izay amoahany “fomba fiteny voarara” ao amin'ny mombamomba azy ety anaty aterineto — “Ορθοδοξία ή θάνατος!” (“Ortodoksia sa fahafatesana!” amin'ny teny Grika).
Araka ny tranonkalam-baovao TJournal, navoitran'ilay fanentanana tamn'ny faran'ny herinandro lasa iny tao amin'ny fizaràna sarin'ny Pikabu, sehatra nisarihan'ny mpampiasa iray mitondra anarana hoe Vselensky ny saina ho any amin'ilay satan'i Milonov mahabe resaka ao amin'ny Vkontakte. Efa ho fito taona lasa izay, noraran'ny fitsarana Rosiana iray io fehezanteny io, ary taty aoriana ny Minisitry ny Fitsarana dia nampiditra azy io ho ao anatin'ny lisitra federalin'ny governemanta ahitana ireo fitaovana voaràra fampiasan'ireo mahery fihetsika.
Na niaro ny fampiasàna io tenifaneva io ho toy ny fanamafisany ny fanolorantenany amin'ny finoana Kristiana Ortodoksa Rosiana aza i Milonov (toy ny midika hoe “Ortodoksia na aleoko maty !”) , namoaka didy ny fitsarana fa mety hidika fampitahorana ilay fehezanteny ho an'ny olona ivelan'ilay fiangonana, mitovitovy amin'ny hoe “Ekeo ny ortodoksia raha tsy te-ho faty!”
Relijiozy mpitahiry fatratra ny nentin-drazana, manana tantara amin'ny fampiasàna io fehezanteny io i Milonov tamin'ny fampielezankeviny politika, ary roa raha kely ireo mpikatroka mafàna fo no nosazian'ny fitsaràna noho ny nizaràn'izy ireo ny sarin'i Milonov nanao akanjobà iray misy io tenifaneva io ihany. i Milonov no heverina ho tena mpanorina niaingàn'ny fandraràn'i St Petersburg ilay antsoina hoe “fampielezankevitry ny pelaka,” izay taty aoriana lasa toy ny fototry ny fandraràna federaly mitovy aminy. Noho ny kiana ataony, ireo ezak'i Milonov hampangina ny fomba fiteny pelaka dia mahatonga ny fandranitany haneho ny fomba fijery mahery fihetsika ananany amin'ny maha-Kristiana azy, lasa tena mahakivy.
Tamin'ny Novambra 2016, Dmitry Semenov, mpirotsaka hofidiana tamin'izany fotoana izanynatolotry ny Open Russia, mpanohitra, ho ao amin'ny Domà-mpanjakàna , dia nosaziana handoa 1.000 robla (eo amin'ny USD $17) taona roa taty aoriana tamin'ny namerenany nandefa ireo sary. Nampanantsoin'ny polisy tao an-toerana mihitsy aza i Semenov hanontaniana. Voalaza fa tamin'ny “fitsongontsogoana kisendrasendra tao amin'ny media sosialy” no nahitan'ireo polisy federaly ny fandikàn-dalàna nataony, saingy manahy ireo mpikatroka hoe nitady izay fomba rehetra ny polisy mba hilàna vaniny aminà mpikambana iray avy amin'ny Open Russia.
Volana dimy taty aoriana, tamin'ity indray mitoraka ity niaraka tamin'ny fitsimbadihan'ny kafkaesque, nanasazy mpikatroka iray hafa ny fitsaràna rosiana noho ny nizaràny ilay tenifaneva nandraràna an'i Milonov, mbola noho ny famerenana nandefa sary iray ahitàna an'i Milonov mitafy ilay akanjobà tamin'ny Desambra 2013 ihany.
Afaka madiodio tamin'ny hadisoana nanenjehana azy ilay mpikatroka mipetraka ao Chuvashia, Dmitry Pankov, saingy avy eo, tamin'ny Martsa 2017, naverin'i Pankov nalefa ny tantara iray tanaty vaovao momba ny fahafahany. Nisy ilay tenifaneva “Ortodoksia na fahafatesana” ihany koa ilay famerenana ny tantara ary dia nitondra fanenjehana vaovao ho an'i Pankov. Tamin'ity indray mandeha ity, fitsarana Chuvash iray no nanameloka azy ho nanaparitaka ny fisainana mahery fihetsika, nandray avy hatrany zotra mifanohitra amin'ny didy teo aloha.
Raha namaly ny lahatsoratra nalefan'i Vselensky tao amin'ny Pikabu tamin'iny faran'ny herinandro iny, nilaza i “Skallpill” hoe efa indray mandeha nitarainany tamin'ny lehiben'ny fampanoavana Rosiana ny momba ilay sata nataon'i Milonov tao amin'ny VKontakte, izay toe efa elaela ihany no nipetraka tao.
Nakarin'i Skallpill ireo sarinà taratasy lazainy fa voarainy tamin'ny Desambra lasa teo avy amin'ny mpampanoa lalànan'ny Repoblika ao St Petersburg, ka tao anatin'izany ny governemanta dia nilaza fa ilay dika Rosiana amin'ny fehezanteny “Ortodoksia sa fahafatesana” irery ihany no voarara any Rosia. Amin'ny teny hafa, toa mampiasa teny Grika i Milonov handosirana ny fandraràna io tenifaneva io ao Rosia.
Araka ilay taratasy, ireo mpampanoa lalàn'ny fanjakàna koa dia nampiseho faniriana tsy mahazatra handray anaty kajikajy ireo antony nampiasàn'i Milonov ilay tenifaneva. “Nanazava izy,” hoy ny ambaran'ilay taratasuy, “fa manana dikany tena samy hafa mihitsy ilay fehezanteny amin'ny teny Rosiana, ho azy manokana fa tsy ilay iray hita taratra tany [amin'ny fitsaràna] izay nandidy ny maha-mpanao mahery fihetsika azy io. […] Ny dikan'ilay fomba fiteny ho an'i Vitaly Milonov dia hoe ‘rehefa tsy eo ny fanajàna ny fenitra Kristiana Ortodoksa sy ny fitsipika, tsy misy ny olombelona,’ ary tsy nihevitra velively ny handranitra fankahalàna na habibiana izy.”
Romotra tamin'izay heverin'izy ireo ho fiangarana nataon'ny Rosiana mpampihatra lalàna, nivoady ireo mpampiasa ny Pikabu fa hitondra ny olana any amin'ny VKontakte, amin'ny fanantenana hahazo ny fampiatoana ny kaontin'i Milonov noho ny fanelezany “fitaovana fampiasan'ny mahery fihetsika”.” Ho an'ny TJournal, mbola manadihady momba ilay olana ireo mpitantana ao amin'ny Vkontakte.